एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रुवाउँदै,हसाउँदै – YesKathmandu.com
एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रुवाउँदै,हसाउँदै
आइतबार ०५, मङि्सर २०७३
अहिले आएर प्रतिपक्षी दल एमाले नानथरीको कुरा थालनी गरेको छ । विपक्षी एमालेलाई मेरो प्रश्न – यो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्न नचाहेको हो ? संविधान कार्यान्वयन भन्ने तर वातावरण चाँहि विगारेर भताभुंग पार्न खोजेको हो त ? आफैंले स्वीकार गरेको कुरालाई औचित्यपुष्टि भएन भनेर कसलाई भन्न खोजेको ?
अहिले गर्न खोजिएको संशोधन उहाँहरुले पहिला मानेको कुराभन्दा बाहिर छैन । अझ प्रतिपक्षका प्रमुख नेताले त पानैपिच्छे हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिर छैनौं ।
म अहिले पनि एमाले नेतृत्वसँग सम्वादमा रहेर सहमति जुट्छ भन्नेमा आशावादी छु । यदि साँच्चै नै संविधान संशोधन हुन पनि नदिने, राष्ट्रलाई एकतावद्ध हुन पनि नदिने र चुनाव पनि हुन नदिने किसिमको परिस्थिति बन्यो भने, ‘म आफ्नो जे एजेण्डा हो, त्यसमा जान्छु ।
त्यो १० प्रदेशको एजेण्डा के हो ? मधेस, आदिवासी जनतजाति, थारु र सबै मजदुर किसान, पहाड, हिमाल तराई सबैलाई जोड्नका निम्ति हाम्रो एजेण्डा जे छ, त्यही एजेण्डामा संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यस्तो गर्न परोस् भन्ने चाहना मेरो छैन, सबैको सहमति र समझदारीले होस् भन्नेतिर नै मेरो जोड छ ।
कालोबजारीबिरुद्ध १७ हजार पटक अनुगमण गरेको आपुर्ति मन्त्रालयमा रेकर्ड ! मन्त्री तीनछक्क
झापा, मोरङ, सुनसरी नटुक्राउन भन्दै विर्तामोडमा खबरदारी जुलुस
बर्षमान पुन भिलेन बन्दा एमाओवादीमा भाँडभैलो, शक्तिकेन्द्रको दवावमा पत्नीलाई सभामुख !
भरतपुर काण्डबारे नयाँ प्रधानन्यायाधीशले के भने ?
निर्वाचन सुरक्षा प्रभावित पार्दै सीमानाकामा बढ्यो घुसपैठ,कडा निगरानी राख्न गृहको आदेश
विप्लवका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी, गृहमन्त्री थापाको पहिलो निशाना विप्लव